अमेरिकामा रहेका भारतियहरु के भन्छन अघोषित नाकाबन्दिका बारेमा? - Enepalese.com
अमेरिकामा रहेका भारतियहरु के भन्छन अघोषित नाकाबन्दिका बारेमा?
इनेप्लिज २०७२ कार्तिक २४ गते १:४२ मा प्रकाशित
भारतियहरुले नेपालमा लगाउदै आएको अघोषित, अमानबिय एबम अब्यबहारिक नाकाबन्दिको पिडा र गम्भिर असर जति स्वदेशमा बस्ने नेपालिहरुले भोगिरहेका छन त्यत्तिकै त नभनौ यो पिडाको अनुभुति र पिडा बिदेशमा बस्ने नेपालिहरुलाइ पनि कम परेको छैन​। प्रबास रोइरहेको छ र चिन्तित पनि त्यत्तिकै। नेपालको शान्ति, सम्ब्रिदि, दिगो बिकास र सुशासनका लागि प्रबासि नेपालिहरु कामना मात्रै गरिरहेका छैननकि तन मन र चिन्तन मात्रिभुमि तिरै छ​।
अमेरिकामा झन्डै झन्डै ४० प्रतिसत वर्किङ्ग क्लासका नेपालिहर भारतिय ब्यबसाय र ब्यापारमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा कार्यरत त कतै साझेदार त कतै भारतियहरु नेपालि ब्यबसाय एबम ब्यबसायिहरुमा कार्यरत पनि छन​। अमेरिकामा भारतियहरु नेपालि कामदारहरु खोजि खोजि काममा लगाउने गर्दछन​। त्यसको एउटै कारण हो कि नेपालिहरु बिस्वासिला, इमान्दार र कर्तब्यनिष्ठ हुन्छन भन्ने छ​। पाएसम्म भारतिय ब्यबसायिहरु भारतिय कामदारहरु भन्दा नेपालि कामदार नै बढि रुचाउछन​।
ब्यबसायकै क्रममा एकजना भारतिय ब्यबसायि (जो टेक्सासमा ब्यबसाय गर्दछ) आफनै भारतिय मानिसका बिरुद्द बोल्दै थियो। “भारतिय कामदारहरु भन्दा नेपालि नै इमान्दार र काम कर्तब्यनिष्ठ हुन्छन​। यिनिहरुले गाड मारिदिन्छन तर नेपालिहरु बिस्वासिला हुन्छन​।” अमेरिकामा नेपालि समाजको ठुलो हिस्सा भारतिय समुदाय र ब्यबसायसङ्ग आबद्द र कार्यरत छन​। अहिलेको नेपालमा भारतियहरुको भुमिका, प्रधानमन्त्रि मोदि र बिजेपिको रबैयाका बारेमा अमेरिकामा रहेका भारतियहरु के भन्छन त​? म सङग केहि भारतियहरु सङ्ग यसै सिलसिलामा कुराकानि भ​एको थियो। उनिहरुमा अहिलेको भारतिय नाकाबन्दि र ब्यबहार अमेरिकामा नेपालिहरु प्रति हेर्ने नजरमा खासै परिबर्तन आयेको पाइएन​। उनिहरु दुखि थिए, चिन्तित पनि र यो नाकाबन्दिको बिरोध गरिरहेका थिए। एकजना भारतिय ब्यबसायि जो मेरै केहि ब्यबसाय नजिकै ब्यबसाय गरिरहेको छ उसले भन्दै थियो कि भारतले अहिले राम्रो गरेन​। यो गलत भयो। नेपाल र भारत भनेको नङ्ग र मासु जस्तै हो। अहिले भारतिय अमेरिकन ब्यबसायिहरु यो अघोषित नाकाबन्दि अबिलम्ब अन्त्य गरि आयात र निर्यात सर्बाधिक रुपमा सुचारु गरिनु पर्दछ​। भारतिय कामदार​, ब्यबसायि एबम अमेरिकन भारतिय समाज नेपालि, नेपाल र अमेरिकामा रहेका नेपालि समाज प्रति जुन मनैदेखि मित्रबत ब्यबहार छ त्यसैसम्बन्ध मार्फत नाकाबन्दिको बिरोधलाइ अघि बढाउनु पर्दछ अमेरिकामा रहेका नेपालिहरुले। व्हाइटहाउसको अगाडि गएर २।४ जनाले उफ्रदैमा न त यो समाधानमा बल पुग्दछ यसले त केबल बर्षौ देखिको अमेरिकन नेपालि एबम भारतिय समाज र समुदायबिचक्​ओ अन्त्रसम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्दछ​। हामि अमेरिकामा छौ, हामिले भारतिय दुताबास​, बाणिज्य कार्यलयहरु, कुटनैतिक नियोग​, भारतिय ब्यबासायिक एबम सामाजिक प्रतिष्ठानहरु, स्थानिय सस्था र ब्याक्ति बिशेषमार्फत सयम भएर बिरोध र दबाब सिर्जना गर्दा बढि परिपक्वता देखिन सक्दछ​।
अमेरिकामा बिना कागज र सुरक्षित रुपमा भारतिय समुदाय सङ्ग मिलेर काम गर्ने हजारौ कागजबिहिन र कागज निर्माणको प्रक्रियामा रहेका नेपालि कामदारहरु छन​। २।४ जना नेपालि सस्थाका हिरोहरुका कारण भोलि तिनिहरुमा पर्ने मानसिक एबम शारिरिक तथा कानुनि समस्या र जटिलतालाइ नतिम्त्याऔ। यो नाकाबन्दि धेरै टाढा जानै सक्दैन​। जति नेपालले घाटा ब्यहोरेको छ त्यत्तिकै भारतले पनि। दबाब ससारबाट मात्रै होइन स्वयम भारत भित्रै बाट भैरहेको छ​।
क्रान्तिकारि भयेर काम देखाउन खोज्दा यसबाट भैरहेको सामाजिक र थुप्रै अन्य ब्यबहारिक दिर्घकालिन असरहरुलाइ पनि मध्यनजर लगाउनु पर्छ​। २५ हजार नेपालि त कसरि जम्मा हुन सक्छन र व्ह्वाइटहाउस अगाडि? बिरोधको कार्यक्रमलाइ परिबर्तन गरि भारतिय दुताबास​, सम्बन्धित निकाय एबम बिरोधको अर्थ र दबाब सिर्जना हुने स्थानहरुमा एउटा सामुहिक समुह बनाएर बिरोधको प्रतिबेदन बुझाउने र समाधानका लागि दबाब दिनु नै उत्तम हुनेछ र यो नै किफायति र परिपक्व कदम हुनेछ​।